Madaxweyne Farmaajo oo koobka dagmooyinka gobalka Banaadir gudoonsiiyay xulka Waaberi – Bandhiga
Madaxweyne Farmaajo oo koobka dagmooyinka gobalka Banaadir gudoonsiiyay xulka Waaberi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ka qeyb galay ciyaartii kama dambeysta aheyd ee dagmooyinka Gobalka Banaadir ee lagu qabtay garoonka Stadium Koonis ayaa hambalyo u diray dagmada Waaberi oo hanatay koobka dagmooyinka gobalka Banaadir.
Tartanka dagmooyinka oo si heer sare ah looga soo shaqeeyay waxa xalay u soo daawasho tagay kumanaan katirsan Shacabka reer Muqdisho, iyo madax ka socotay dowladda oo uu Madaxweynaha ugu horeeyo waxaana xalay Finalkiisa ciyaaray Shibis iyo waabari oo 1-0 ay guusha ku raacday dagmada Waaberi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa koobka gudoonsiiyay xulka dagmada Waaberi waxaana sidoo kale uu bixiyay shahaadooyin maamus ah oo la guddoonsiiyey qaar ka mid ah taliyeyaasha Ciidanka Booliska ee ku hawlannaa tartanka tan iyo markii uu bilowday, waxaana uu sidoo kale amaanay xulka dagmada Shibis oo soo gaartay ciyaarta Final-ka.
Sanadkii 2-aad oo xeriir ah ayey hananeysaa dagmada Waaberi koobka dagmoooyinka gobalka Banaadir waxaana lagu tilmaamay mid kamid ah kooxaha ugu waa weyn ee dalka ka dhisan.
“ Waxaan ka cabsi qabaa in la doorto Baarlamaan Shabaab ka amar qaata” Madaxweynaha Jabuuti
Hay’adda FOA oo sheegtay in Soomaaliya ay saldhig u noqotay Ayaxa Geeska Afrika
Ra’isul Wasaare Rooble oo ka hadlay walaaca ay doorashooyinka ka qabaan musharaxiinta